Drip Marketing Fizarana 1: Iza no miahy?
Alarobia 18, 2010 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Eny, mikasa ny hanoratra fizarana ho avy aho amin'ity andiana lahatsoratra ity amin'ny marketing drip. Saingy, na dia tsy hanao izany aza aho dia maminaza hoe: mbola miasa ihany ny lohateny. Ny ampahany voalohany amin'ny fampielezana marketing drip dia tsy manapa-kevitra izay hosoratana. Tsy mifidy anarana domain na famoronana pejy fitobiana. Tsy manangana ny forme contact anao ary mandeha ho azy ny fanentanana. Ny ampahany 1 amin'ny fampielezana drip dia mitady hoe iza no tena miahy ny zavatra holazainao.
Ny famaritana hoe iza no miahy dia mety holazaina amin'ny fomba mety kokoa: iza no tianao hikarakara. Henonao izany amin'ny dokam-barotra, amin'ny tamba-jotra, ary amin'ny mpanazatra orinasa na aiza na aiza - tadiavo ny akany. Zava-dehibe indrindra amin'ny marketing drip ity satria alohan'ny ahafahanao mitete dia mila mitarika; ary hahazoana izany fitarihana izany dia mila manolotra zavatra sarobidy ianao; ary ahoana no ahalalanao fa misy lanjany izany mandra-pahafantatrao hoe iza no mividy?
Marina izany, "mividy." Atreho izany, na dia tsy mangataka azy ireo hanokatra ny poketrany aza ianao, dia mangataka amin'ny olona mba hividy zavatra aminao - azo inoana fa ny atiny novolavolainao ho tombontsoany. Ankehitriny, tsy mividy vola izy ireo. Ny vola mividy fahalalana amin'ny mpivarotra mahay dia tsy dolara sy cents. Ny vola dia fampahalalana mifandraika… ary ny taha ambony amin'ny vidim-piainana dia avo be.
Soda iray kapoaka taloha nandeha nikela, sa tsy izany? Marina, ary adiresy mailaka manan-kery ampiasaina handehanana amin'ny fidiran'ny boky vahiny (tadidio ireo). Tsy izay intsony. Ny vinavina rehetra mijery Internet dia mitondra boky am-paosy feno ny data -n'izy ireo – ny adiresy mailaka, ny nomeraon-telefaona ary koa ny demografika. Ireo izay mangataka izany angona fifandraisana izany nefa tsy manome na inona na inona sarobidy ho setrin'izany dia toy ny mpanafika marketing amin'ny Internet, mangataka vola fotsiny noho ny fahasoavan'ilay mpanome. Raha tokony hangataka ianao dia manaova fifanarahana ara-drariny. Manolora zavatra sarobidy toa torohevitra maimaimpoana avy amin'ny mpanoratra hajaina, dia whitepaper PDF maimaim-poana, seminera na hetsika maimaimpoana, na ny tiako manokana, an e-mazava ho azy. Ary, arakaraka ny itadiavanao vola (izany hoe ny angon-drakitra misimisy kokoa izay angatahinao ny hitarika azy ireo) ny sanda tsy maintsy noforoninao. Raha tsy izany dia ho hitanao fa mivarotra soda amin'ny vidiny $ 10 ianao nefa tsy misy mpandray.
Ankehitriny, ny ampahany "iza" amin'ity no miahy izay tena manomboka manadino. Hitanao fa ny sanda amin'ny zavatra atolotrao dia mifandraika mivantana amin'izay anoloranao azy. Raha fantatrao hoe iza ny mpihaino anao, dia (ary amin'izay ihany) azonao atao ny mamolavola vokatra iray izay ho vonona hividy amin'ny vidin'ny mombamomba azy ireo. Raha ny tena izy dia tokony handany fotoana betsaka amin'ny fampiroboroboana ny vokatra kasainao hivarotra ho an'ny angon-drakitra fifandraisana ianao rehefa manao ny vokatra kasainao hivarotana vola. Rehefa dinihina tokoa, raha tsy misy ilay teo aloha dia kely ny fanantenana ho an'ity farany.
Ka raha mieritreritra ny hanomboka fampielezan-kevitra mitete ianao dia manontania tena hoe “iza no miraharaha?” Mamolavola tolotra izay mendrika ny angatahinao ho takalony – aza atao mahantra. Ary, raha vao nividy izy ireo dia aza hadino ny manatitra.
Ny fanoherana ny fiaraha-monina rehetra? Marina?
Fiaraha-miasa amin'ireo mpisintaka amin'ny media sosialy
Aug 19, 2010 amin'ny 11: 20 AM
Mieritreritra aho fa mirona hieritreritra… tsara aho fa miraharaha azy ireo ihany koa… Tena zava-dehibe ny fahalalana ny mpihaino anao sy ny fahafantarana hoe iza no miraharaha. Lahatsoratra tsara